Ihe 3 iji gbasaa iru ahịa na vidiyo | Martech Zone
Vidio bụ otu n’ime ngwa ahịa azụmaahịa kachasị ike na ngwa agha gị iji gbasaa iru ahịa, mana a na-eleghara ya anya, na-emezighị ya na / ma ọ bụ ghọtahiere ya.
Enweghị mgbagha na mmepụta ọdịnaya vidiyo na-eyi egwu. Akụrụngwa nwere ike ịdị oke ọnụ; usoro nhazi ahụ na-ewe oge, na ịchọta obi ike n'ihu igwefoto anaghị adị mfe mgbe niile. Obi dị anyị ụtọ na anyị nwere ọtụtụ nhọrọ dị taa iji nyere aka imeri nsogbu ndị a. Kacha ọhụrụ smartphones na-enye 4K video, edezi software aghọwo ihe inweta na mfe iji, na i nwere ike na-eme gị on-igwefoto nkà na-elekọta mmadụ na netwọk dị Facebook Live, Snapchat, na Periscope.
Yabụ ọ bara uru itinye oge iji merie nsogbu ndị a, kedu ka vidiyo ga-esi nyere aka ịgbasa ahịa gị?
Mobile Ọrụ N'ezie Dị ka na Share Video Ads!
Mgbe onye na-azụ ahịa nke oge a chọrọ ịmatakwu banyere ihe ha chọrọ mmuo mbụ bụ iru maka ama iji nweta mkpa ndị ahụ. Nchọpụta Google na-egosi na ndị ọrụ ama ama na-ele vidiyo na ngwaọrụ ha bụ 1.4x yikarịrị ka ha ga-ekiri mgbasa ozi mgbe ahụ ndị nọ na desktọọpụ, ọbụnakwa 1.8x nwere ike ịkekọrịta ha.
Google Hụrụ vidiyo n'anya!
Ọdịnaya gị bụ 53x kwesiri karie igosi mbu na peeji nchọta ihe njin ọchụchọ Google ma ọ bụrụ na ịnwere vidiyo agbakwunyere na ibe webụsaịtị gị. Nke a nwere ike bụrụ ihe kpatara ya Cicsco na-ebu amụma vidiyo ahụ ga - emejupụta 69% nke azụmaahịa ịntanetị niile na 2017.
Vidiyo na-agbanwekwu atụmanya gaa ndị ahịa!
Vidio dị mfe na peeji ọdịda nwere ike nwekwuo ntughari site na 80%. Ọ bụrụ na ị na-eji vidiyo na email, ị nwere ike ịbawanye ọnụego mgbanwe gị ruo 300%. Kedu maka B2B? 50% nke ndị isi na-achọ ozi ndị ọzọ mgbe ha hụrụ ngwaahịa / ọrụ na vidiyo, 65% gaa na weebụsaịtị, na 39% kpọọ.
Enwere m ike ịga n'ihu, mana ugbu a ihe atọ ndị a dị mfe ga-ezu iji mee ka ị nwee obi ụtọ banyere otu ị ga - esi gbasaa iru ahia na vidiyo. Atụmanya ga-ele anya ọdịnaya gị n'ezie, Google ga-eme ka ọdịnaya gị bụrụ ihe kacha mkpa, vidiyo ga-agbanwe ọdịnaya gị n'ime dollar.
Tags: Vidio Ahịaahịa vidiyovideo ahịa uru
Dee 21, 2016 na 9: 56 AM
Ndewo Harrison, ekwenyere m na gị.
Vidiyo bụ ihe na-esote Ọdịnaya. Vidio nwere ike inye ezigbo ahụmịhe onye ọrụ ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ niile. Na nso nso a ka m batara otu edemede nke gosipụtara mkpa video dị na ịgbalite ntụgharị. Jayson DeMers onye edemede Forbes ekwuola n’otu n’ime edemede ya na ọdịnihu bụ ọdịnaya vidiyo. Nakwa ihe ọmụmụ nke Cisco mere buo amụma na, site na 2018 79% nke ịntanetị ga-abịa site na mgbasa ozi vidiyo. N'ihi na gị ref, Chick isiokwu a nke na-ezo mkpa nke video http://www.kamkash.com/top-8-online-marketing-strategies/